काठमाण्डौ । स्पर्श लघुवित्तलाई प्राप्ति गरेपछि ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज बुधबारबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। लमजुङको बेसीसहर–८ केन्द्रीय कार्यालय भई राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र भएको ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२६ केन्द्रीय कार्यालय भएको स्पर्स लघुवित्तलाई प्र�...
स्पर्सलाई प्राप्ति गरेको ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले यही वैशाख ८ बाट एकीकृत कारोबार गर्ने
काठमाण्डौ । स्पर्स लघुवित्तलाई प्राप्ति गरेपछि ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यही वैशाख ८ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकै नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको हो। दुवै लघुवित्तले प्राप्ति प्रक्रियासम्बन्धी गत गत पुस २९ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि...
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमीटेडले महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । दुवै संस्थाका संचालक समितिका अध्यक्षबीच बिहीबार साँझ गाभ्ने/गाभिने विषयमा प्रारम्भिक समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको हो । काठमाण्डौको होटल अम्बासडरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेशनल माइक्रोफाइनान्सका...
काठमाण्डौ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडलाई प्राप्ति(एक्वीजिसन) गर्ने भएको छ । प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा यी दुई संस्थाका अध्यक्षले बुधबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राप्ति सम्बन्धी समझदारीपत्रमा डिप्रोक्स लघुवित्तका अध्यक्ष दीपक खनाल र नाडेपका अध्यक्ष...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति(एक्वीजिसन) गर्ने भएको छ । असोज २० गते साँझ ६ः३० बजे दुवै वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुबीच गाभ्ने गाभिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको असोज २० गते नै बसेको सञ्चालक समितिको ११८ औं वैठकबाट गण्डकी...
काठमाण्डौ । विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रही पूर्वी नेपालका तीन जिल्लामा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको सिर्जना फाइनान्ससँगको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको भनिए पनि राष्ट्रबैंकले भने थप ३ महिनाका लागि एलओआई थपेको छ । सिर्जना फाइनान्सलाई सनराइज बैंक लिमीटेडले प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको केही महिनासम्म मर्जरको...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर तथा एक्वीजिसनलाई स्वेच्छिक बनाएको छ । मर्जरमा जान चाहनेका लागि केही प्याकेजहरु समेत घोषणा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले विगत लामो समयदेखि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरको नीतिलाई लगातार प्राथमिकतामा राखिरहेको छ । तर, वाणिज्य बैंकको संख्या घट्नुको साटो...
काठमाण्डौ। गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले यही असार २१ गते आइतबारबाट एकीकृत वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने भएको छ। बैंकले आज मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी असार २१ गतेदेखि सम्पूर्ण ग्राहक, सेयरधनी, नियमनकारी निकाय तथा अन्य सम्बन्धित सबैलाई एकीकृत वित्तीय कारोबार सञ्चालनबारे जानकारी गराएको हो। गण्डकी...
काठमाण्डौ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा झार्नका लागि पथान्तरणको तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय गौर.(ण्ढडठ को सो आयोजनामा सुरुङको निर्माणको काम झण्डै सकिएकाले पानी सुरुङमा पठाउन लागिएको हो । सुरुङ निर्माणको काम सकिएर अहिले अन्तिम काम भइरहेको छ । बन्दाबन्दीले सो आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएपनि निर्धारित समय असार मसान्तमा नै...
अन्तिम अवस्थामा किन भाँडियो सनराइजद्वारा सिर्जना फाइनान्स प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया ?
काठमाण्डौ । करिब ५ महिनाअघि भएको सम्झौतालाई रद्ध गरेसँगै सनराइज बैंक लिमीटेडले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया भाँडिएको छ । सनराइज बैंक लिमीटेडले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड लगायतलाई पत्र लेख्दै सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्तिका लागि भएको सम्झौता रद्ध भएको जानकारी गराएसँगै यी दुई संस्थाबीचको गाभ्ने...
एनएमबीले कञ्चनलाई १००ः८५ को स्वाप अनुपातमा प्राप्ति गर्ने
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमीटेडले आफू कमजोर रहेको क्षेत्रका राम्रा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राप्ति गर्ने प्रयासलाई लकडाउनको अवधिमा पनि जारी राखेको छ । केही समयअघि आफू कमजोर रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा बलियो बन्ने उद्देश्यले त्यहाँको निकै सशक्त बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडलाई एनएमबीले अक्वायर(प्राप्ति) गरेको थियो । सोही बेला...